Waa maxay faa'iido ah ee mashiinka CNC Switzerland marka la barbar dhigo lathe ee gacanta tiro? - Shiinaha Shandong New Ankai-Kitco
Mashiinka Swiss CNC iska leh qalabka processing sax ah, oo waxay ku buuxin kartaa machining isku dhafan ee gaariga, axdi qarameedka, qoditaanka, caajis, derderkii iyo derderkii waqti isku mid ah. Waxaa inta badan loo isticmaalaa processing Dufcaddii ee hardware sax iyo qaybo aan caadiga ahayn ee gaarka ah-qaabeeya usheeda dhexe.
Maxaa yeelay, qaab-dhismeedka mashiinka socda waa ka lathe gacanta tiro dhaqameed oo kala duwan, sax oolnimada machining iyo machining mashiinka socda waa ka badan tahay in of lathe NC ah. Qaado xanuun leh heshiis biaxial qalab design this, aad bay u badbaadiyay waqti wareegga processing, habka waqti-dhaafsiga iyo qalab si ay u qalab mishiinka by yaraynta mindidii, multi xirmi saldhigga qalab iyo chip thread axial wax ku ool ah u dhaqaaqin hawlaha noqnoqashada, dunmiiqa toos ah shaqo tusmaynta laba jeer inta lagu guda jiro processing, soo gaabin waqtiga vacuum ah. Qalab goynta Chip kaalin aad muhiim u ah in geeddi-socodka machining of dunmiiqa iyo workpiece ku tirtirayaan qaybo ka mid ah. Waxay bixisaa damaanad xoog sax machining joogto ah. In view of suuqa wadnaha mishiinka, 38mm waa dhexroor processing ugu weyn, taas oo ka dhigaysa mashiinka socda degan faa'iido aad u weyn suuqa dhidibka sax nidaaminta. Taxanaha qalabka mashiinka sidoo kale in lagu qalabeeyaa karaa qalabka quudinta si toos ah, taas oo ka warqaba wax soo saarka si buuxda iswada ee hal qalab mashiinka, yaraynaysaa kharashka shaqaalaha iyo waxyaabaha xun ee habka wax soo saarka, waxaana loo isticmaali karaa si loo soo saaro tiro badan oo ah qaybo ka qodaa sax.
Oolnimada machining iyo saxnimada machining badan lathe NC ayaa u boodboodi ah oo tayo leh, sababta oo ah aalad heshiis double, aad bay u yareeyo wakhtiga wareegga ee nidaaminta, iyo waqti in ay is dhaafsadaan qalab on qalab mishiinka by yaraynta mindidii, multi function xirmi saldhigga qalab, thread jarida axial wax ku ool ah u dhaqaaqin hawlaha noqnoqashada, si toos ah shaqo tusmaynta dunmiiqa laba mar marka processing, ogayn wakhtiga soo gaabiyey. Qalab goynta waxaa had iyo jeer machined in qayb ka mid ah ku tirtirayaan dunmiiqa iyo workpiece ka, kaas oo hubinaya in sax ah si joogta ah saxnimada machining ah. Waqtigan xaadirka ah, dhexroorka machining ugu badan ee mashiinka wadnaha ee suuqa waa 38mm, iyo waxa ay leedahay faa'iido aad u weyn suuqa dhidibka sax nidaaminta. Taxanaha qalabka mashiinka lagu qalabeeyaa karaa qalabka quudinta si toos ah in ay ogaadaan wax soo saarka si toos ah hal qalab mashiin, iyo in la yareeyo kharashka shaqada iyo heerka xun ee wax soo saarka. Waa arrin aad u habboon ee wax soo saarka ballaaran ee qaybo ka qodaa sax.
waqti Post: May-02-2018